बालबालिकाका कुरा कसरी सुन्ने ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
बालबालिकाका कुरा कसरी सुन्ने ?
२०७७ आश्विन २७, मंगलवार ०८:०० गते
हामीले केही समयअघि असल शिक्षकका विभिन्न गुणहरुका बारेमा चर्चा गरेका थियौँ । तिनै विभिन्न गुण अथवा भनौँ विशेषतामध्ये बालबालिकाका कुरालाई ध्यान दिएर सुन्ने कलालाई पनि उल्लेख गरेका थियौँ । यहाँ असल शिक्षकले कसरी एउटा विद्यार्थी, बालक वा बालिकाको कुरा, चिन्ता र चासोलाई ध्यान दिएर सुन्नुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ ।
श्रवण क्षमता विशिष्ट हुन्छ
एउटा असल शिक्षकको श्रवण क्षमता विशिष्ट हुन्छ । उसले बालबालिकाकै आवाजमा उनीहरुसितै बसेर ध्यानका साथ तिनका कुरा सुन्नुका अतिरिक्त बालबालिकाका हावभाव, भङ्गिमा, कटाक्ष र आँखाको भाषालाई पनि बुझ्न र सुन्न सक्छ । आफ्नो पेसाप्रति प्रतिबद्ध शिक्षकले विद्यार्थीबाहेक केही पनि देख्दैन । विद्यार्थी नपाउँदा वा उनीहरुसित रमाउन नपाउँदा ठूलो कुरा गुमाएको अनुभूति गर्दछ । यसैले, बालबालिकालाई हेर्नासाथ उनीहरुले के भन्न खोजिरहेका छन् भन्ने भाव पनि उसले सहजै बुझ्न सक्दछ । यसैले, बालबालिकासितै बसेर त उसले तिनका कुरा सुन्दछ नै, उनीहरुका हावभाव र कटाक्षलाई पनि महसुस गर्न सक्दछ ।
बालबालिकाका चासो, गुनासा र चाहनालाई श्रवण गर्न सक्ने शिक्षकले नै राम्रो शिक्षण गर्ने हो । जब हामीले उनीहरुसित नजिकिएर, उनीहरुलाई चासो दिएर तिनका कुरा सुन्दछौँ, त्यसले उनीहरुसितको हाम्रो आत्मीयता त बढेर जान्छ नै, उनीहरुको हामीप्रतिको आदरभाव र सम्मानमा पनि वृद्धि भएर जान्छ ।
बालबालिकाका कुरालाई सुन्ने बानीले उनीहरु आफू एक्लो नभएको महसुस गर्दछन् भने ‘गुरू, गुरूआमाले सुनाउने मात्रै होइन, हामीलाई सुन्नु पनि हुन्छ’ भन्ने भावको विकास हुन्छ । बालबालिका पोखिन चाहन्छन्, आफ्ना कुरा सुनाएर हलुका हुन चाहन्छन्, तपाईंहामीजस्तै । उनीहरुले आफ्नै शिक्षकले आफ्ना कुरालाई गहिरोसित सुनिदिँदा फुरूक्क पर्दछन् र हामीले भनेका वा सिकाएका कुरालाई अक्षरशः पालन गर्ने आज्ञाकारी बनेर जान्छन् । बालबालिकाका कुरा सुन्ने गर्दा उनीहरुमा आउने सकारात्मक रुपान्तरण धेरै छन्, तर तिनका कुरालाई कसरी सुन्दा अझ प्रभावकारी होला त ? आउनुस्, ती बुँदाहरुमा चिन्तन गरौँ ।
तिनले के भनिरहेका छन् ?
बालबालिकाका कुरा सुन्दा शिक्षकले उनीहरुले जे कुरा भन्दैछन्, त्यो कुन विषयवस्तुमा आधारित छ वा के भन्दैछन् भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरूरी छ । आफ्ना कुरा सुनाउँदा पक्कै पनि कुनै विषय उनीहरुसित हुन्छ, त्यो विषयवस्तु थाहा पाउनु र त्यसमा केन्द्रित हुनु असल श्रवण हो । यदि हामीले बालबालिकाले भनेका कुराको खास विषय वा चुरो थाहा पाउन सकेनौँ भने उनीहरुलाई आवश्यक परामर्श र उपचार गर्न पनि हामी असफल हुन्छौँ ।
बालबालिकाले सधैँ हामीसित नजिकिएर वा हामीनजिक आएर आफ्ना कुरा सुनाउँदैनन् । यदि सधैँ आउने गरेका छन्, बोल्ने गरेका छन् र तपाईंले सुन्ने गर्नुभएको छ भने त्यतिबेला उनीहरु सामान्य विषयमा केन्द्रित भइरहेका हुन्छन् । तर, यदाकदा सुन्नुपर्दा उनीहरुसित विशेष विषय छ र उनीहरुले कुनै गम्भीर विषयका बारेमा आफ्ना कुरा सुनाउँदै छन् भन्ने बिर्सनुहुँदैन । यसर्थ, बालबालिकाका कुरा सुन्दा उनीहरुले के भनिरहेका छन् भन्ने कुरा निकै मह¤वपूर्ण हुन्छ ।
आफूले सोच्न छोडिदिएर सुन्नु
बाबुनानीहरुका कुरा सुन्दा प्रायः हामीले उनीहरुलाई यसरी भन् वा उसरी भन् भनेर भन्दछौँ, जुन बेठीक हो । उनीहरुलाई उनीहरुकै शैलीमा बोल्न दिनुपर्दछ । जब आफ्नै ताल, सुर, लय र शैलीमा ती बोल्दछन् वा तिनले हामीलाई आफ्ना कुरा सुनाउँछन् तब मात्र तिनको विषयवस्तु, तिनको समस्या वा तिनले व्यक्त गर्न खोजेको कुरा थाहा पाउन सकिन्छ, अन्यथा उनीहरुले आफूलाई पूर्णतः व्यक्त गर्न सक्दैनन् ।
यही विषयलाई ध्यान दिएर हामीले बालबालिकालाई सुन्दा आफूलाई बिर्सिएर सुन्नुपर्दछ । उनीहरुलाई सुन्दा आफ्ना आग्रह, मान्यता, प्रश्न र विचारबाट मुक्त भएर सुन्नुपर्दछ । अझ भन्नुपर्दा आफूलाई बिर्सिएर सुन्नुपर्दछ । आफूलाई बिर्सनु भनेकै आफ्ना आग्रह र मान्यतालाई बीचमा नल्याउनु हो । बीचमा हाम्रो अहम्, आग्रह र मान्यता आउनासाथ बालबालिकाको सत्य प्रकट हुन पाउँदैन । जब सत्य र चुरो कुरा उनीहरुबाट हामीले सुन्न सक्दैनौँ, अनि कसरी तिनलाई रुपान्तरित गर्न सकिन्छ र ? तसर्थ, आफूलाई बिर्सिएर बालबालिकालाई सुन्नुपर्दछ ।
बच्चाले अनुभूति हुने गरी सुन्नु
प्रायः हामी शिक्षकहरुले बालबालिकाका कुरामा त्यति सारो ध्यान दिँदैनौँ । उनीहरुले आफ्ना कुरा बताइरहँदा बीचबीचमा अरुसित कुरा गर्ने, अन्ततिर हेर्ने, किताब पढ्नतिर लाग्ने वा अन्य विषयमा ध्यान दिने बानी तपाईंहामी धेरै शिक्षकको छ, जुन राम्रो होइन । यदि तपाईं कुनै विद्यार्थी वा बालबालिकालाई सुन्नका लागि बसिरहनुभएको छ, उसले तपाईंलाई आफ्ना कुरा सुनाइरहेको छ भने उसलाई गहिरोसित सुन्नु तपाईंको कर्तव्य हो ।
बालबालिका बोलिरहेका बेलामा हामीले अरु कुरामा ध्यान दियौँ, कसैसित बोल्न थाल्यौँ वा अन्ततिर लाग्यौँ भने बालबालिकाले आफ्ना कुरा सुनाउँदैनन् । उनीहरुले सर अथवा मिसले मेरो कुरा सुनिरहनुभएको छैन, मैले किन सुनाउने भन्ने ठान्दछ र रोक्दछ । उनीहरुलाई तपाईंहामीले तिनका कुरा सुनिरहेका छौँ भन्ने महसुस हुनुपर्दछ । त्यस्तो महसुस हामी उनीहरुका कुरामा ध्यानस्थ भएको बेलामा मात्रै तिनले गर्दछन् । तसर्थ, बच्चाले अनुभूति हुने गरी सुन्नु नै यथार्थमा सही श्रवण हो ।
बालबालिकाले हामी उनीहरुसितै छौँ, उनीहरुलाई सुनिरहेका छौँ वा हामीले तिनका कुरामा गहिरो ध्यान दिइरहेका छौँ भन्ने कुराको महसुस गराउन बीचबीचमा प्रश्न गर्न पनि सकिन्छ । बीचबीचमा प्रश्न गर्दा हामी सँगै छौँ र तिनका कुरा पूरै सुनिरहेका छौँ भन्ने उनीहरुले ठान्दछन् । बीचबीचमा प्रश्न गर्ने भनेर उनीहरुलाई कुरै सुनाउन नमिल्ने गरी एकोहोरो प्रश्न गर्न पनि हुँदैन । यदि ५ मिनेट उनीहरुले आफ्ना कुरा राखेका छन् भने एउटासम्म प्रश्न गर्न सकिन्छ ।
बीचमा प्रश्न गर्नुका मुख्य दुई प्रयोजन छन् : एक, बच्चालाई हामी उनीहरुसितै छौँ भन्ने अनुभूति दिलाउन । दुई, उनीहरुको विषयवस्तुबारे थप स्पष्ट हुन । यसैले, बीचबीचमा छोटाछोटा प्रश्न गर्नु पनि उत्कृष्ट श्रवण हो, तर अनावश्यक प्रश्नचाहिँ होइन ।
उनीहरुका लागि सहज, आफू पनि सहज
बालबालिकाले त्यस्तो व्यक्तिसित मात्रै आफ्ना कुरा स्पष्टरुपमा राख्न सक्छन्, जससित तिनले सजिलो महसुस गर्दछन् । प्रायः बालबालिका ठूला मानिससित आफ्ना कुरा राख्दैनन्, कारण उनीहरुका लागि ती ठूला भनिएका मानिस असहज लाग्दछन्, सरल लाग्दैनन् । तसर्थ, बालबालिकाका कुरा सुन्ने हो यदि भने उनीहरुका लागि हामी बाघ र गैँडा बन्ने होइन, तिनका साथीजस्तै बन्ने हो । उनीहरुले महसुस गरुन् कि मेरो सरले वा मिसले मेरो कुरा प्रेमले सुन्नुहुन्छ, गल्ती हुँदा पनि रिसाउनुहुन्न, स्नेह गर्नुहुन्छ ।
बालबालिकाले हामीलाई आफ्ना कुरा सुनाइरहँदा हामीले पनि सहजरुपमा तिनका कुरा सुन्ने अवस्थामा हामी पनि हुनु अनिवार्य छ । हामी पनि सबै कामबाट मुक्त भएर, समय लिएर, शान्त ठाउँमा आनन्दसित बसेर बालबालिकाका कुरा सुन्न सक्दछौँ । धेरै मानिस भएको ठाउँमा बस्दा त्यति सहज हुँदैन । बालबालिकाले आफ्ना कुरा खुलेर भन्न पनि सक्दैनन्, हामीले पनि सहज महसुस गर्दैनौँ । तसर्थ, बालबालिकाले उनीहरुले सजिलो मान्ने गरी आफ्ना कुरा सहजरुपमा राख्न पाऊन् र हामीले पनि सहजरुपमा सुन्न पाऊँ भन्ने अवस्थाचाहिँ अवश्य निर्माण हुनुपर्दछ ।
पूरै खुल्न र पोखिन दिने
यसअघि हामीले बीचबीचमा प्रश्न गर्ने कुरा त भन्यौँ, तर साथमा अनावश्यक प्रश्न नगरौँ भन्ने कुरा पनि गरेका थियौँ । त्यसो भन्नुको अर्थ उनीहरु बोल्न खोज्दा अवरोध नगरौँ भन्नु हो । बालबालिकालाई उनीहरु बोल्न खोज्दा वा बोलिरहँदा निर्बाधरुपमा बोल्न दिऊँ । बीचमा अन्ततिर जाने, बालबालिकाभन्दा हामी शिक्षक नै धेरै बोल्ने, उनीहरुलाई डर, धाक, धम्की दिने काम ग¥यौँ भने त्यसले राम्रोभन्दा धेरै नराम्रो नै गर्दछ ।
उनीहरु बोलिरहँदा सम्पूर्णरुपमा तिनलाई खुल्न र पोखिन दिनुपर्दछ । उनीहरु ढुक्क भएर आफ्ना कुरा राख्न पाऊन् । बीचबीचमा अनावश्यक अवरोध गर्ने, आफूले अन्ततिर ध्यान दिने, बाहिरी मान्छेसित बोल्ने, ठाउँ छोडेर बाहिर निस्कने गर्नुहुँदैन । बालबालिका बोल्दा उसले के महसुस गरोस् भने सर अथवा मिसले मेरै कल्याणको लागि मेरा कुरा सुनिरहनुभएको छ, मलाइ यति प्रेम गरेर मेरा समस्यालाई समाधान प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ, सबै कुरा बिर्सिएर मेरो लागि समय निकाल्नुभएको छ, तसर्थ मैले इमानदार भएर मेरा कुरा राख्नुपर्दछ । शिक्षकले पनि बालबालिकाको कल्याणकै लागि मैले यिनका कुरा सुन्दैछु भन्ने कुरा कहिल्यै बिर्सनुहुँदैन ।
भनेका कुराको संक्षेपीकरण, सारांश
शिक्षकले बेलाबेलामा बालबालिकाले जेजे बोल्छन्, तिनको टिपोट गर्नुपर्दछ । टिपोट त गर्र्नुपर्दछ, तर बच्चाले अप्ठ्यारो मान्ने गरी होइन । सरले वा मिसले मेरो कुरा सुन्नतिर भन्दा धेरै लेख्नतिर लाग्नुभएको छ, के सुन्नुहोला र खै भन्ने बच्चाले सोच्नुभएन । अर्थात्, बच्चाले थाहा नै नपाउने गरी केही बुँदाहरुलाई टिपोट गरेर त्यसको सार निकाल्नुपर्दछ ।
निष्कर्षको रुपमा एउटा अनुच्छेद लेख्न सकिन्छ, तर बच्चाका कुरा सुनिसकेपछि मात्रै । बच्चाका कुरा सुनिरहँदा उसका कुरालाई बुँदागतरुपमा उत्तिखेरै टिपोट गर्न सकिन्छ । सुन्नेबेला अत्यन्त छोटाछोटा बुँदा बनाई टिपोट गर्ने र उसका कुरा सुनेर पठाइसकेपछि तिनै बुँदालाई एउटा अनुच्छेदमा विस्तार गरी निष्कर्ष राख्न सकिन्छ । यसो गर्दा बच्चाले बोलेका कुरा, उसको विषयवस्तु र पहिचान गरिएको समस्याको अभिलेखीकरण हुन जान्छ, जुन निकै मह¤वपूर्ण हुन्छ ।
गोप्यताको उच्च सम्मान
बालबालिकाका कुरा सुन्दा उनीहरुले व्यक्त गरेका कुराहरु कति आफूसित मात्रै राख्नुपर्ने खालका पनि हुन्छन् । उसले व्यक्त गरेका कुरा अरुलाई सुनाउँदा बच्चाप्रतिको सम्मान र आदर कम हुने स्थिति पनि आउन सक्छ । तसर्थ, शिक्षक बच्चाको गोपनीयतालाई कदर गर्न र उसको समग्र कल्याणका लागि चिन्तित हुन निकै जरूरी छ ।
बच्चाले आफ्ना कुरा बोलिसकेपछि ऊ प्रसन्न भएको हुनुपर्दछ । मैले मेरो आदरणीय सर वा मिसलाई मेरा कुरा सुनाएको छु, यो कुरा बाहिर जाँदैन किनकि उहाँ अत्यन्त गम्भीर हुनुहुन्छ, बाबा र आमासमान हुनुभएका हुँदा उहाँले मेरा कमजोरीलाई सार्वजनिक गर्नुहुँदैन वा मैले बताएका गोप्य कुराको गोपनीयता कायम राख्नुहुन्छ भन्ने बालबालिकालाई महसुस भएको हुनुपर्दछ ।
यसप्रकार, सामान्यतया हामीले बालबालिकाका कुरा सुन्दा यिनै बुँदाहरुलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । सुन्न त हामीले धेरैपटक बालबालिकाका कुरा सुनेका छौँ र तिनको उचित सम्मान गरी समस्याको समाधान पनि गर्दै आएका छौँ, तर पनि तिनलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीले यहाँ उल्लेख गरेका बुँदाहरुले बालबालिकालाई कसरी सुन्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्न सक्छन् र श्रवण क्रममा सहायक हुन सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै दुई मत छैन । [email protected]